ခေါင်းဖြီးလိုက်လို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်မညစ်ရအောင် - Achawlaymyar
ခေါင်းဖြီးလို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်ညစ်ရသလို၊ ဆိုင်မှာခေါင်းသွားလျှော်ရင်လ ဲအစ်မဆံပင်တေ ွကျွတ်တယ်နော် ပြောရင် စိတ်ပိုညစ်ရပါတယ်။
အမှတ်မထင်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့တဲ့ဆေးနည်းလေးနဲ့ စမ်းလုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေလို့ ကိုယ့်လိုစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ ဆေးဘက်ဝင်တာသိပေမဲ့ ကြက်သွန်နီကိုကြိတ်ပြီး ခေါင်းပေါ်လိမ်းတဲ့အခါ ကြက်သွန်စိမ်းနံ့ပျောက်ဖို့ိ တော်တော်ခေါင်းလျှော်ယူရတာ ကျွန်မအတွက် ်သိပ်အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ တော်တော်အဆင် ပြေပါတယ်။
ဆန်ကိုပန်ကန်လုံးလေးနဲ့တစ်ခွက်ယူပါ။ ဆန်ကိုထမင်းချက်သလိုပဲ နှစ်ကြိမ်လောက်ဖွဖွလေးဆေးပါ.
ဆေးထားတဲ့ဆန်ကို နှစ်နာရီလောက်စိမ်ထားလိုက်ပါ ရေနည်းနည်းနဲ့ပဲစိမ်ပါ.
ကြက်သွန်နီကိုအခွံခွာပါ ကြက်သွန်နီကို ရှစ်စိပ်စိပ်လိုက်ပါ (ကျွန်မကတော့ဆန်ပန်းကန်လုံး တစ်ခွက်ဆို ကြက်သွန်နီနှစ်လုံး သုံးပါတယ်)
မီးဖိုပေါ်မှာ ပွက်ပွက်ဆူအောင် မွှေပေးပါ ဆန်နည်းနည်းကျေတဲ့အထိထားပါ ..(ဆန်ပြုတ်အဆင့်မရောက်ပါ)
အဲ့လောက်ဆို ..ရေစစ်ထဲကိုထည့်ပြီး အရည်ညစ်ယူပါ။ ရေကုန်သွားအောင်ညှစ်ပါ
ဘောက်ရှိတဲ့သူမို့ သံပရာ(သို့) သံပရိုသီးအရည်ထည့်ပါတယ်။ဘောက်လဲတက်တာလျှော့ကျသွားပါတယ်။
ခေါင်း မလျှော်ခင် ဆေးရည်ကိုယူပြီးဦးရေပြားအထိလိမ်းပါတယ်။ ဆံံပင်ပျော့ချင်ရင်တရော်ကင်ပွန်းထည့်ပါ၊ဘောက်ပျောက်ရင်ချင်ရင်သံပရာသီးအရည်ညှစ်ထည့်ပါ။
ဆံံပင်အရောင်တောက်ချင်ရင်သံလွင်ဆီ၊အုန်းဆီတစ်ခုခုကိုထည့်ပါ။ (15) မိနစ်လောက်ဦးရေပြားကော၊ဆံပင်ထိပ်ဖျားတွေအထိပါလိမ်းပေးပြီးခဏနှိပ်ပေးရပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ Hair Cap နဲ့ဆယ်မိနစ်လောက်